CORBITION sonye na 8th China (Shanghai) International Technology Import and Export Fair
CORBITION ụlọ ọrụ e ọdịda nke aha pụtara ìhè tax ugwo enterprise na Shanghai. Nke a bụ nkwenye nke teknụzụ CORBITION, kamakwa ịlaghachi ndị ọrụ niile CORBITION na ọha mmadụ. N'oge gara aga 8th China (Shanghai) International Technology Import na Export Fair, ngwaahịa anyị ka a ghọtara site na àgwà nke Chinese na artisan mmụọ nke Ajụjụ ọnụ na-akọ. N'ime ihe ngosi a, CORBITION gosipụtara 36-bit na 48-bit nucleic acid ndị na-ewepụta, yana usoro nke ndị na-eri ọgwụ dị ka kọlụm ịdị ọcha nke nucleic, efere miri emi miri, efere PCR, ogwe aka magnet, wdg. Na ngosi a, anyị tumadi na-akwalite ngwá ọrụ mmịpụta abụọ nke nucleic acid, nke nwere njirimara nke ịrụ ọrụ dị mfe, njem njem dị mma, obere oghere oghere, wdg, ma webata usoro ihe omume kacha mma Site na ngosipụta a, ọ bụghị naanị iji gosipụta ngwaahịa anyị dị elu, kamakwa iji kwalite onyonyo ụlọ ọrụ anyị, nyere anyị aka ụlọ ọrụ CORBITION nwee mmepe ogologo oge. Companylọ ọrụ ihe ngosi a gbasaa ọhụụ, imeghe uche, mmụta dị elu, mgbanwe na imekọ ihe ọnụ, jiri ihe ngosi a zuru oke, yana ndị ahịa na ndị na-ere ahịa ka ha kwukọrịta, kwukọrịta, kpaa nkata, mee ka ọhụhụ ụlọ ọrụ ahụ pụta na mmetụta ya, kamakwa ịga n'ihu Ghọta njirimara nke ngwaahịa ndị ọgbọ nke ọgbọ, iji meziwanye usoro nke ngwaahịa ha, rụọ uru nke ha. Site na ngosi a anyị nwetara ọtụtụ, anyị ga-anọgide na-arụsi ọrụ ike, mee ka ọtụtụ ndị mmadụ mara banyere ika anyị.
Fightlụso ọrịa a ọgụ bụ ọrụ onye ọ bụla
onye nduzi nke Laboratory Department nke Peking Union Medical College Hospital, kwuru na N'ajụjụ ọnụ na njedebe nke 2020: "N'ebe ụfọdụ, ndị na-achọpụta PCR na ndị na-ewepụta acid nucleic dị, ọbụnakwa e guzobere ụlọ ọgwụ PCR. Otú ọ dị, isi ihe dị na ya bụ ịzụ ndị ọrụ aka nke nkà mmụta ihe omimi nke pụrụ ịnagide ọrịa a. ” Ọ bụ ihe dị mkpa.